Coulda ila Lyrics — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Made in uu meesha ka isaga oo kale, waxay qabaa inaan fiends saboolka baahan
Waxaan ma jirin markii ay toogteen ninkii
Waxaan ma xallin karo xaaladaha, ma dhihi doonaa in aan awoodo
Laakiin waxaan yaqaaniin camalka noloshayda sida nin dhallinyaro madow
Garo ma ahaan karo waalan in qaar ka fahmi weydo
Laakiin waxaa laga yaabaa in aad doonaynin
Haddii aad eegay noloshayda iyo aad istaagay meeshii aan taagnaa
indhahayga Isticmaal in ay eegaan jidadka, kuwaas oo
Waa mid aad u dhabta ah marka waxaan dareemayaa sida ay coulda ii ahayd
i sawir sida dhallintaada a
Doorashada baxay cabitaanka dukaanka markii aan arkay
Shaqaalaha dukaanka ayaa dooneysa i, ka dibna uu qaylo
Dhibcood aan hip oo i Waxaan arkay sheegayaa
Laakiin kor u qaban, Waxaan aan la ogayn inaan anigu ahaa in cabsi
Uma aan waa ogahay inaan idiin soo gani karo blackberry ah
Aad u cajiib ah, inuu i arkay sida tuug la
Markii aan lahaa marnaba qabto kiis, marna xaday ama daroogada iibsaday
Ama sida xumad, Wakhtigii aan u duulay show a
Full farxadda, finna raabka qol ay ka buuxaan dadka waawayn
markaas ka baxsan Waxaan u arkaa wax ka qori wejiga
Jeebbo on gacmahayga, cajIibi hoos dhexda
Waa OL isla, isla OL
Waxaan ku haboon sharaxaad ka mid ah dambi ah si ay u ogaadaan
Waxay i tusay sawirka, soo
Ma waxaad dhalmada? Annagu ma u eg a
Well gaysteen u maleeyay in aan ku sameeyey haddii aad xaq u raadinaya
Nin kasta oo madow waan ogahay
sheekooyin helay sida kuwa, oo gurto wixii ay aan la beeran
Marka ay aad u qaadan tuug ka boodi
Waxa aan muhim aheyn haddii aad aasa bamka ah
Bal eeg, Anigu garan maayo haddii Mike Brown lahaa gacmaha kor u
Laakiin waxaan qoraal homie ku yidhi ahay u istaagaan
Oo ahay kuu sheegi waxaan dareemayaa inaan u fiirsado jidadka, kuwaas oo
Oo waxaad ku tidhaahdaan waa dhabta ah marka waxaan dareemayaa sida ay coulda ii ahayd
Cirka dareen cirro, indhaha oo casaada
kulanka Black iyo caddaan, daruuraha sare mareen madaxayga
Sidee dheer ilaa ay maqashay wixii aan sheegay
Sidee dheer ilaa ay maqlaan waxa aan sheegay?
Qayliya soo baxay oo dhan gaysteen wanaagsan
Dagaal guys xun, samaynta joogsato wanaagsan
Waan necbahay in on blocks surta
In dhamaadka, waxay isku daya inay kugu buro la qalato oo dhan
Waxaan doonayaa inaan ku odhan raggayga dhallinyarada ah oo dhan madow
Waan ogahay waxa uu dareemayaa sida waxaan kaliya oo aan ku guuleysan karto
Laakiin in xanaaqaaga ha dembaabin
Ha xaqiijin waxa ay fikirka
Ha u ogolaan qofna noo sheeg aan helay waxaan ku kacaya
Qaar ka mid ah isku dayi doonaa in ay na xidhay hoos ma shaqeynaayo
Waan ogahay ma aha cadaalad ah, laakiin waxaynu og nahay in uu dan
Oo maalin maalmaha ka mid ayuu u tirtiri doonaa iska ilmada
Xaggee ay aad u rajeeya at? Mine waa ku jirtaa
Halkee waa rajo at? Mine waa ku jirtaa
Waxaan helay shaqeeyaan si ay u sameeyaan, laakiin rajo waa ku jirtaa
Waxay heshay shaqo si aad u samayn, laakiin rajo waa ku jirtaa
Xusuuso: Coulda Me Ma u- — TRIP LEE
Jordan • December 4, 2014 at 12:53 waxaan ahay • Reply
Waxaan arki qaar ka mid ah qodobada ay ka dhigtay in lyrics ah, iyo inaan ogahay this song waa shakhsi, laakiin waxa uu dareensan yahay sida ay tahay song in uu siinayo in si fowdo this.
Qaybta labaad ee aayadda 3-dii, hadalka ku saabsan la taabtay hoos maxaa yeelay, wuxuu “qallalku” sharaxaad ka mid ah dambiyada ku. Waxaan la taabtay hor, dhinaca gobolada ka dib markii ay iibsatay lacagihii loogu talagalay 3 miles, maxaa yeelay, waan soo xirtay beanie iyo sweatshirt a iga dhigtay in aan u eg dhinaca adag ee magaalada ahaa. Ma ahan oo keliya in, laakiin waxaa la ii wadista awoowayaashii Impala aan la aabaheey kursiga rakaabka, oo waxay baari sheekooyinka noo ku saabsan cinwaanka dib uga dukaanka Apple hoose halkaas oo aan hoos u off my Macbook in la hagaajiyo. waxaa Wac takoorid, u wac wax kasta oo, laakiin waxa ay aheyd wax laakiin midabka ah ee aan maqaarka. Mid ka mid ah sarkaalka u Cad, kale wuxuu ahaa madow. Taasi ii ahaa.
line First of aayadda ugu horeysay: “Ha doonayaa inaan qofna ma maqlaan our xanuun”. Pretty hubiyo in aan ogaado waxa ay ka dhigan tahay. eraygii “our” in weedha in, ii dareemeysaa diidniintayda ka song, sida aan garan doontaa halganka waa, ama sida aad dareemayso. laga yaabaa in aanay aanan awoodin in ay fahmaan, laakiin Ilaah i siiyey hab ay u taageero, iyada oo Salaada.
Sii on fikirkiisu in, “Waxaan dhamaanteen laga sameeyay ekaanshaha Ilaah ee aad ogtahay”. Waxaa jira counter oo dhan si ay u song. Ilaah wuu ina abuuray in uu image, iyo midabka lahayn, naafada ah, jinsi ama asal ummadda uu sameeyay Ilaah eegaa qof kasta wuxuu duwan abuuray wax kasta oo, sidaa darteed maxaan aan? Waa maxay sababta aan daryeelaa naftayda wax ka duwan waxaad ka, iyo qeybsanaan ku xigeenka?
Waxaan heli waayey dheeraad ah, lakiin waxaan dareemayaa Waxaan ku filan ayuu yiri. Trip, sida ay laf Masiixa huwanaynaa Rumaysad noo, Ma fiirsanno ha at qof kasta oo wax ka duwan ama u kala duwan ula dhaqmaan. Waxaan iska tuur Self, oo diirada saaray iyo dareenka on isaga, iyo iyadoo aan loo eegin sida mid kasta oo inaga mid ah ayaa dareensan in, marka waxaan dhihi waxaan nahay Nasaara, habka aan u dhaqmaan iyo waxyaalaha aynu nidhaahno ka tarjumaya sida ay dadku u arkaan isaga inaga dhex. Sidaas darteed haddii waxa ay idiin keeni,, waa in aan adiga ku eegaya wax ka duwan? Maxaa dhacaya haddii waxa igu ahayd?
My dhibic waa, noqon “Colorblind” Adduun.
Tory • December 4, 2014 at 10:13 waxaan ahay • Reply
Brother Urdun, Waxaan kaliya muujin kartaa in “colorblindness” ma aha jawaabta arimahan? Ha i degdeg ah u wareegi ka Tartan jinsiga. Ragga iyo dumarka aad u kala duwan yihiin, iyo in uu yahay wax wanaagsan! Si aad u noqoto “indha la 'jinsiga” noqon lahaa mid aad u dhaawici, maxaa yeelay waxa ay si dabiici ah jeclaan lahaa in muhiimadda ay leedahay kala, oo na ka maqnaan doona on Ilaah. Waa maxay waxaan ula jeedaa in in uu yahay in sida dadka, naxariis ku socotaa in aan u imid inaan si dabiici ah sida ay loogu talagalay haweenka (aragto ereyga jenjeero!). Haddii aan kaliya eegay nin, waxaan seegi doono on naxariista Ilaah. Waxaan ka akhriso lahaa waxa ku saabsan, laakiin arki la taaban karo ma, Tusaale ahaan aadanaha ee Naxariistiisa (Waxaan ahay og waxaan ku hadlaya guud ee dagaal, laakiin kaliya in la sameeyo hal dhibic).
Race waa si la mid ah. Waxaan run ahaantii aad u kala duwan, dabiici ah! Madowga, Aasiyaan, Whites, Hispanics, waxaan sida caadiga ah waa mid aad u kala duwan in our aragtida, shaqsiyad, dhaqanka, iwm. Tani waa wax qurux badan. By eegaya mid ka mid ah dhaqamada hamiday kale, waxaan ka arki karnaa in Ilaah waa Ilaah dareen (dareen ah oo ku saabsan wax xaq u). By eegaya mid ka mid ah ee dhaqanka “cadhada u gaabiyaa(raag),” waxaan ka arki karnaa in Ilaah waa samir nala, oo cadhada u gaabiyaa. By eegaya dhaqamada kala duwan, dhab ahaantii waxaan ka heli si aad u aragto sawiro badan oo Ilaah.
Haddii aan su'aasha, waxaan oo dhan waa in loola dhaqmo si isku mid ah, sababtoo ah waxaan oo dhan ku abuuray Dei Imago ah. Si kastaba ha ahaatee, Annagu waxaannu nahay kala duwan, iyo in ay okay! Waxaan ahay madow qeybtii, cad qeybtii, oo ay leeyihiin ton ah “sifooyin madow,” iyo “sifooyin cad.” okay. Taasi waa weyn! Waxaan rajeynayaa in ay na tusto wax ku saabsan Ilaah! cod waan dabaal iyo waxbarashada ee kala duwan halkii colorblindness, iyo dabaal run dhici kartaa oo keliya in injiilka.
Erayadaadu way igu dhalisay in ay qoraan song la isticmaalayo kala duwanaansho ah erayadiinna: “oo dhan waa la waxaan ku abuurray Dei Imago ah, Si kastaba ha ahaatee, Annagu waxaannu nahay kala duwan iyo in ka badan OK”. Waad ku mahadsan tahay hindise inuu hadlo, oo ololka xigmad. Inta kale ee song ah ayaa u soo baxay in ay caddeeyaan sida Gaarna hadiyad aynaan mutaysan erayada ay u muujiyaan midnimo our ee kala duwan iyo in Masiix.
Sorry….*Tory *….ma Tori.
Tevn • December 4, 2014 at 10:53 waxaan ahay • Reply
Wax wanaagsan baad tidhi Urdun. Waxaan odhan doonaa waxan keliya: Halkii isagoo colorblind, aan halkii uu arki karin jeeda kala duwan qowmiyadaha sida abuurka Ilaah? Waxaan wada istaagaan la isaga hoos magaca Ciise. Isagu wuxuu inoo yahay banner – ma laha haddii aan ka Ferguson tahay, Cali, Oregon, Alabama ama New York. Ciise waa dhibic focal. Iyo dhaqan oo doonaya in ay inaga sooci galay “laga tirada badan yahay” iyo kooxo kala duwan, aynu dhex taagan sida jidhka Masiixa, hoose isaga.
Laakiin waxaan mahad aad aragti on song. Waad ku mahadsan tahay dhismaha Boqortooyada up for ammaantiisa!
safar, mahad afkaartaan. Waxaan tixgelinaynaa in la wadaago waayo aragnimadaada sida nin ka mid ah midabka, kuwaas oo u maleeyo in uu aqoonsiga iyo gobolka naxdin leh oo ka mid ah dhaqanka dhex Lens ee Injiilka. Sayidka Rabbiga ahu wuxuu sii wadi laga yaabaa in la dhiso uu Kingdom iyo warkiisa shaqadaada. Mahadsanid.
Gabriel • December 4, 2014 at 2:13 waxaan ahay • Reply
Ku mahadsan tahay in aad safar, aad tahay ku dayasho leh run iyo waxyoonay. Ka dhig kor u shaqo wanaagsan iyo tiirsan hanuun, sayidkaygiiyow, ee.
Michael • December 4, 2014 at 5:17 waxaan ahay • Reply
Waxaa naxo akhriska oo dhan dhacdooyinka hadda dunida oo dhan. Xuquuqda laga York si Kenya. arrimaha Painfull weli ma waxaan ku bartaan iyaga ka iyo sii qabanayaan wixii la mid ah. Waa waqti aan si dhab ah u noqday walaalaheen dhawraya
Michael • December 4, 2014 at 6:01 waxaan ahay • Reply
Trip Lee, this ma iman kara wakhti ka duwan. Waxaan u baahanahay in ka badan ay ku adkaysato dhibic iyo si walba #couldabeenme
Cristella • December 4, 2014 at 6:05 waxaan ahay • Reply
Mahadmaad heshaan aad safar for post blog iyo Wiilka
Richard • December 4, 2014 at 7:37 waxaan ahay • Reply
run ahaantii murugo si aad u maqasho, weli runtii ma qiyaasi kartaa sida y'all dareemaan laakiin waxaan aragnaa in wax badan oo ppl madow uun ka heli kaliya runtii si degdeg ah… dareemaan murugo u al waayo,, Waxaan dareemayaa yaraa oo dhan…
Richard • December 4, 2014 at 7:38 waxaan ahay • Reply
*kaliya = xukumay
Todd • December 4, 2014 at 7:48 waxaan ahay • Reply
war xoogbadane, si qurux badan gurato. Keenay sano Indhahayga markii aan ugu yaraan waxaa la filayaa. Waxaan dhawaan helay aad music iyo waxa uu ahaa daahfurka a yaab leh adkaa waqtiga ee noloshayda Ilaah saas loo arko. ammaantaada inta aad si, dhallinyarada walaalkiis.
Louis • December 4, 2014 at 8:09 waxaan ahay • Reply
Tani waa jawharad dhab ah, Trip.
Qiish • December 4, 2014 at 8:14 waxaan ahay • Reply
this song jeclaada! Waayo, rajadaydu waa Alle in aad u!! Help noo AABBAHA!!!
Xusuuso: New Music: Trip Lee – “Coulda Me Ma u-” |
Robert • December 4, 2014 at 9:42 waxaan ahay • Reply
Trust Ilaah iyo hayso Sameynta Trip Good! Ha iftiimo Nuurkiinnee.
Si ay sheegayaan in Eebe ma arki midabka waa unBiblical. (Jordan) Kitaabku waxa uu leeyahay in Eebe u abuuray quruumaha iyo afafka kala duwan si uu haybad bandhigo. Waa in aynaan iska in aysan ka jirin! Haddii aad dhihi aad rabto in aad waxaa jiri Mu'min ah kan waxyaalahan ka tukasho ama wax kasta oo waddo la hadlaya markaas maxaad isku dayayaan in ay ku doodi uu song? Waxa uu la wadaago oo uu wax yeelo. uu xanuun. Stuff in dadka madowga ah, maraan. Maxaad u leedahay inaad dareento kuwo ajanabi laga waayo, isaga oo sheegay in. Waa maxay sababta aad ONE tusaale ahaan ka mid ah waayo-aragnimo xun u leeyihiin in ay meesha ka saaro ama buriyaan ah waxyeello iyo jahawareer in dad badan oo madow u leeyihiin in ay wajiga maalin kasta. Ma aha oo kaliya in hal mar. Ninkayga had iyo jeer uu leeyahay si ay u tagaan oo dhaafsan si loo hubiyo in uu yimaado sida aan ku hanjabay in uu dadka!! maxaad? Maxay waa in uu waa madow si uu waxaa loo arkaa cabsi iyo hanjabaad. Maxay waa in uu ka hadlayaa muujiya in dadka dareemaya in ay u baahan yihiin si ay u sameeyaan comment, wow aadan waxa aan filayaa, ama aadan sida dadka kale ee madow. Ha dad kor u bixin oo adiga iyo waa la yaabay hab aad ku hadasho by? Stop waayo, min ah oo kaliya oo ka mid maqlaan dadka, Qasab ma aha in aad raacsan tahay ama u fahmaan. Just tusi damqasho qaar ka mid ah iyo caawimo qayb ka mid ah xal u noqon! Thanks for wadaago aad Trip wadnaha Lee.
Abiigayil • December 4, 2014 at 1:28 pm • Reply
Trip, Taasu way wanaagsan tahay.
Qalbigaygu wuxuu la dhaawaco sababtoo ah waxaa jira weli waa sabab si songs qortaa sida tan. Weli waxaa jira dagaal naftooda madow.
Waxaa laga yaabaa in maalin maalmaha ka mid aan ka dhigi kara xaq u.
Dardaaranka • December 4, 2014 at 2:44 pm • Reply
Ka dhig kor u Trip shaqo wanaagga! Erayadaadu iyo markhaati yihiin awood! Rabbiga ha idin barakeeyo,, inaad xajisaan, korkiinna uu wejiga ku dhaashado!
Trip Lee nin,
Waxaan kaliya karaan in aan ku koray in siidaayay waaweyn ku jeclahay codkaaga?! Ahh waxaa si dhab ah ceeriin iyo! Tani waa feat weyn. Bro. Aad run, Waxaan ahay mid aad u murugeysan tahay inay maqasho ku saabsan oo dhan musuqmaasuq ee ayaa halkan lagu muujiyey on hawada iyo waa waalan sida eexda iyo foorari dunida tani waxay noqon kartaa – Waxaan aad u niyad jabay in aan tartan gaar ah kaas oo lagu ekaansho iyo baahiyay dul. video ka Brooklyn NY waa mid ka mid ah wax laga naxo ugu Waxaan arkay in waqti dheer.
Waan jeclahay waxa Urdun waxaa leh. anigu waxaan ahay America madow, naag, laakiin in my opinion, jinsiga uusan door weyn ma ciyaari, naag madow la bartilmaameedsan karaa siyaabo takoor sidoo kale. Weligay ma aan lagu beegsaday shakhsi waayo midabka ah ee aan maqaarka, laakiin waxaan jeclahay in aan u malaynayaa in aan marnaba neceb lahaa ama inaad wax xun in qof kuwaas oo ahaa inuu wax i yeelo ama i dili in xaalad la mid ah kuwa aan ka hadlayno. Isagoo Masiixi ah, Waxaan si joogto ah waaniyey aayadda meeshii Ciise wuxuu inoo sheegayaa inuu ka soo leexdo dhabanka kale. Haddii qof aad neceb, aad u jeclahay, inkastoo ay in. Midab marnaba joojin doonaa dhacaya, laakiin haddii qof aad weerar, jeedin dhabanka kale. Waxaad ma ka dhigi kartaa qof aad aqbasho, alaabtayda oo sidan oo kale ma si ay u joojiyaan. Laakiin waxaan u baahannahay in stop fikirka in kiiyoo yihiin tartanka oo kaliya lala beegsaday. Faraqa kaliya ee waa, cad oo ku saabsan dambiga madow waa dembi kaliya ee lagu soo bixiyey in wararka. Maxaa ku saabsan nin caddaan ku dhinteen Hispanic a? Ama Asian ah ku dilay madow ah? oo dhan waa la abuuray Waxaan si siman. Haa, waxaa jiray waqti marka addoonsiga waxaa dhammaan dadka madow ogaa, laakiin maanta waxaa jira addoonsiga iyo cunsuriyadda dhacaya ka mid ah tartanka kasta. Ilaah ma arki dhimashada dadka madow wax ka duwan uu u arko dhimashada qof kale. Waxaan qabaa inaan halmaamay fikradda ah in, ma qof ee nolosha arrimaha badan oo kale. Oo aynu sidoo kale iloobin in aan runtii ma oga xaqiiqada dhabta ah ee dambiyadan. Trip, Anigu ma neceb ahay on your song at dhan, waa wax weyn in qof kasta oo uu leeyahay ay opinion u gaar ah oo ay tani tahay idinkaa. Inkastoo, Waxaan odhan doonaa, haa waxa aad la yaabaa, laakiin waxa ay sidoo kale joogey karaa nin caddaan. Us dadka madow ma yihiin bartilmaameed kaliya. Aan isku dayno si ay u arkaan kasta oo kale oo jidka Ilaah na arka, 100 boqolkiiba siman.
Sida qomiyado a, color indha la '(Haa, maxaa yeelay, hidaha iyo dhaqanka waxaa ka mid ah jinsiyadaha aad u badan oo kala duwan si ay u bilaabaan oo diiradda saaraya mid ka mid waqti. Waxaan iyaga u dabaal ma jiro ee ka yar) naag anigu ma qiyaasi kartaa wax kasta oo nin madow waxaa dhex socday. Gaar ahaan marka ay dadku si toos ah ku boodaan on tartanka oo Ilaah ka tago baxay waxaa ka mid ah. Laakiin waxaan ku faraxsanahay in aad Ilaah bay ku rideen, halkaas oo uu iska leh. Waxa uu iska leh in xaaladda this, Wuxuu iska leh sida kan Caddaaladda. Waxaan iska leh oo isaga uun tala saarta.
Waxaan ciyaaray this song for qol ay ka buuxaan dadka isku dayaya in ay maqlaan walaalahooda ooyaa shalay. Waxaa jiray oo ku saabsan 18 oo inaga mid ah iyo 6/8 waxay u caddaayeen. oo erayadaadiina waad sii adkaynayo wax.
Ogaada in erayada aad ay gaarto dadka moolka, siyaabo qurux badan. Waad ku mahadsan tahay milicsiga daacad ah.
Haddii aad this samaynta adiga kugu saabsan ama ku saabsan loolanka gaar ah ka dibna waxa uu leeyahay waxba kuma laha Ilaah. Your song kaliya shows sababta arrinta cunsuriyadda ay sii sida ay u sameeya, waayo, ninna waa diyaar in la beddelo wareegga qayliyo oo kaliya oo ku saabsan sida ay u loola dhaqmo si liidata cad, Mexico, Asian, qof ayaa ku dhinta jidadka isku waqtiga oo dhan by dambiyo iyo la joojiyay by qof aan aqbalay wali. Your mid caddaalad si buuxda ama aadan ma jiraan wax khadadka ganaax ama marmarsiiyo. Waxaad soo qaadaan cabsi iyo xanaaq, Ilaahyo ma aha in kuwa weli aad doorato in aad noqon. Waxaad in si g gelin Ilaah kaliya si Masiixiyiinta sii dhagaysto idinka idin maqallo intaannu markaas samaynta taagan saxda ah ee Ilaah halkii aad lyrics noo sheeg qeybiso istaag midab in aad u socoto si ay u sameeyaan song TIS ku saabsan cunsuriyadda iyo ma Ilaah. Waxaad aan ku fadhiisan karaa 2 miisaska aad sidoo kale ugu fariisan kursi miis haddii Aabbaha ama aad ugu fariisan kursi miis ee dhacay ka. Si kastaba ha ahaatee aad laga badiyay taageere. Waxaan rajaynayaa in aad ku iman kartaa in la aad ka cabsataan oo aad u aragto sida ixtiraam fudud bedeli lahaa cabsi gelin ixtiraam la wadaago iyo wada shaqaynaya. Haddii ay coulda aad la, ka dibna waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in dib looga fikiro doorashooyin aad noloshaada.
Jon • August 17, 2015 at 12:00 waxaan ahay • Reply
Isagu ma aha ka dhanka midig gaysteen? Uma maleynayo. Waan jeclahay safarka oo aan la sugi karin ilaa uu album soo socda, mar kasta in laga yaabaa. Hees FIICAN.
Xusuuso: 257 || Gacaliye Trip Lee, Waxaan Waxaad maqal – Magazine Ahaysiinay
Kianna • Laga yaabaa 20, 2016 at 4:30 pm • Reply
Waxaan kaliya dhegaystay this song lyrics oo waa awood. “Xaggee ay aad u rajeeya at?” -Trip Lee. Waxaan u jeclaaday!
oo dhan walaalahay Ma, Walaalo ah, arinsadeen, iyo dhaawicid. waan ka xumahay. Waxaan qayb ka mid ah ahay American ah. Laakiinse anigu waxaan ahay dhegaysiga. Waxaan maqli xanuunkaaga.
Eraygii waa sii baxay. dhaleeceyn No, jacayl oo kaliya.
hi! Waxaan ognahay in ay tani waa nooc ka mid ah ka baxsan mowduuca laakiin waxaan
loo baahan yahay si aad u weydiiso. Ma dhismaha blog si fiican-la aasaasay sida idinkaa ah waxay u baahan yihiin qadar weyn
shaqada? Waxaan si buuxda cusub ahay in hubkaa si kastaba ha ahaatee waxaan ku samayn qortaa in aan xusuus qor maalin kasta.
Waxaan jeclaan lahaa inuu ku soo bilowdo blog a sidaas darteed waxaan wadaagi karnaa aan waayo-aragnimo u gaar ah
iyo dareenka online. Fadlan ii soo sheeg haddii aad qabto wax
talooyinka ama talooyin milkiilayaasha blog, aamadani cusub.